भारतमा सङ्क्रमितको संख्या अत्यधिक बढ्यो, एकैदिन ५० हजारमा संक्रमण पुष्टि ! « Postpati – News For All
भारतमा सङ्क्रमितको संख्या अत्यधिक बढ्यो, एकैदिन ५० हजारमा संक्रमण पुष्टि !
साउन १२, काठमाडौँ | भारतमा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितको संख्या अत्यधिक बृद्धि भएको छ । केन्द्रिय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सोमबार दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ४९ हजार ९३१ जना कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् ।
प्रदेशअनुसार हेर्दा सवैभन्दा धेरै महाराष्ट्र राज्यमा तीन लाख ७५ हजार ७९९ सङ्क्रमित भएका छन् । त्यसैगरी तमिलनाडुमा दुई लाख १३ हजार ७२३ जना र दिल्ली राज्यमा एक लाख ३० हजार ६०६ जना सङ्क्रमित भएका छन् । रासस
२०७७ श्रावण १२,सोमबार को दिन प्रकाशित